Dagaalka ka dhacay garoon diyaaradeed Magaalada Axum | Berberanews.com
Home WARARKA Dagaalka ka dhacay garoon diyaaradeed Magaalada Axum
Itoobiya_(Berberanews)-Garoonka diyaaradaha ee muhiimka ah ee ku yaalla magaalada Aksum ee waqooyiga Itoobiya ayaa noqday goob dagaal oo ay isku hayaan xoogagga iska so horjeeda ee colaadda Itoobiya.
Ilo wareedyada taabacsan milatariga dowladda Itoobiya ayaa sheegay in milatariga ay gacanta ku hayaan maamulka garoonka, balse sida muuqato taasi kama horistaagin xoogaga gaarka ah ee Tigray inay weeraraan garoonka dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo ay burbur xoog leh gaarsiiyaan dhabbaha ay ku ordaan diyaaradaha.
Iyadoo isgaarsiintu ay wali go’an tahay ma ahan mid sahlan in la xaqiijiyo sheegashada laba dhinac.
Balse waxaan eegnay muuqaalka weerarka la sheegay in lagu qaaday garoonka, waxaanna barbardhignay sawirrada garoonka oo lagu qaaday dayax gacmeedka si aan qiyaas uga qaadanna sida ay wax dhaceen.
Dagaalka garonka Aksum
Xoogagga Itoobiya ayaa qabsaday garoonka 11-kii November, sida ay dad taabacsan dowladda ku qoreen baraha bulshada.
Wixii intaasi ka horreeyay waxay gacanta ugu jireen xooggga gaarka a ee TPLF.
Balse waxay u muuqataa in gacan ku haynta garoonkaasi iyo deegaannada ku xeeran aan lagu kala bixin taariikhadaasi sida ay ku doodeen taageerayaasha dowladda.
Maalintii Khamiista ee 19-ka November ayaa hoggaamiyaha Tigray Debretsion Gebremichael, waxa uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in magaalada Aksum ay iyaga wali gacanta ku hayaan, balse ma cadda in garoonka uu ku jiray gacantooda iyo in kale.
”Akusm anagaa wali gacanta ku hayna, ciidammo ayaa la soo diray si ay noola dagaalamaan. Balse dagaal ayaa wali socdo”, ayu yidhi Debretsion
Maalintii Jimcaha oo ku aadanayd 20-ka November, dowladda ayaa daaha ka rogtay inay la wareegtay magaalada Aksum, balse ay TPLF dhaawac ballaaran gaarsiisay kaabayaasha magaalada.
Axaddii oo ay taariikda ku beegnayd 22-kii November, ayay warbaahinta dowladda waxa ay daabacday muuqaal iyo sawirro muujinayay burbur soo gaaray dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan ee garoonka Aksum iyo godad u muuqday dhufeysyo laga qoday gudaha garoonka.
Previous articleSomalia must learn to stand alone | By Hassan Sheikh Mohamud
Next articleSomaliland: Oddoroska miisaaniyad-sanadeedka 2021